Analysis Wings U29S - ခေါက်နိုင်သော FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် VR မျက်မှန်များနှင့် HD ကင်မရာများ | Gadget သတင်း
နောက်တစ်နေ့၊ Actualidad Gadget မှာမင်းတို့ထဲကတစ်ခုရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုကျွန်တော်တို့ယူလာပေးတယ် ကျနော်တို့စမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ရယ်စရာအကောင်းဆုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ၎င်းသည်နောက်လာမည့်ခရစ်စမတ်ဈေးကွက်တွင်ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သူ့နာမည်က တောင်ပံများ U29S, ၎င်းကို UDIRC Technology မှထုတ်လုပ်သည်။ FPV mode တွင်ပျံသန်းနိုင်သည့် HD ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသောခေါက်နိုင်သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမြင့်နှင့်အနေအထားကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်ပျံသန်းလွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပျံသန်းအတွက်စတင်ပါ။
အဆိုပါ U29S နှင့်အတူတစ် ဦး မျှမျှတတပြည့်စုံ device ကို ၎င်းသည် VR မျက်မှန်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်သင့်တော်သောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည် ငါတို့ကရနိုင်ကတည်းက ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် RCTecnic တွင်ယူရို ၁၄၉ သာရနိုင်သည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် U29S ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
3 HD ကင်မရာနှင့် FPV
4 နိဂုံး, စျေးနှုန်းနှင့်ဝယ်ယူ link ကို
U29S သည်သေးငယ်သောအရွယ်အစားရှိဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းရှိပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်သည် ခေါက်နိုင်ပါတယ် ဘယ်နေရာမှာမဆိုသယ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်သန့်ရှင်းမှုရှိပြီးရိုးရှင်းမှုအနည်းဆုံးနှင့်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောထိတွေ့နိုင်သောအရည်အသွေးရှိသည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ။ ၎င်း၏အလေးချိန်သည်ပထမအကြိမ်တွင်ထင်ရသလောက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ပျံသန်းချိန်တွင်များစွာတန်ဖိုးထားတတ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားအပြင်ပိုင်း (လေမပါဘဲ) အတွင်းအနည်းဆုံးအာမခံချက်များဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်အလင်းနှစ်မျိုးပါရှိသည်။ နောက်ဘက်များမှာအနီရောင်နှင့်ရှေ့မီးရောင်များသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာ၏ ဦး ခေါင်းတည်ရှိရာနေရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားသိရှိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ The ကင်မရာသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ရှေ့တွင်တည်ရှိသည်, အမြင့်ချိန်ညှိသည်နှင့်တစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် အလွန်သာလွန်အရည်အသွေး ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုပျံသန်းစဉ်ကအလွန်တန်ဖိုးကြီးပြီးတန်ဖိုးများစွာရှိသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များတွင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် HD အရည်အသွေးဖြင့်ဗွီဒီယိုများကို 1280x720p resolution ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်မြန်နှုန်း 30 Mbps နှုန်းဖြင့်ထုတ်လွှင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဘူတာရုံသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ဒီဇိုင်းကိုရိုးရှင်းသောပုံစံနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည် Buzz ပါဝင်သည် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ဘက်ထရီကုန်သွားသည့်အခါသို့မဟုတ်၎င်းသည်အချက်ပြမှုပြတ်လပ်သွားသည်နှင့်၎င်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာရောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားရန်။
တိုးတက်မှုအတွက်ရှုထောင့်အဖြစ် ၎င်းကိရိယာတွင်ဓါးသွားများအတွက်ကာကွယ်မှုတပ်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လေယာဉ်မှူးသည်၎င်း၏ကိုင်တွယ်ရာတွင်လွယ်ကူမှုမရရှိမချင်းပထမ ဦး ဆုံးပျံသန်းချိန်တွင်ကာကွယ်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုသည်။
ဘူတာတွင်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုနှင့်အလေးချိန်ရှိသောကြောင့်၎င်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားမောင်းနှင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ပယ်ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးစရာနှစ်ခုရှိသည်။ ကိုယ်တိုင်အင်ဂျင်ကိုစက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ နှစ်ဖက်လုံးအားညွှန်ပြခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ထည့်ခြင်းဖြင့်ကိရိယာကိုလက်ဖြင့်မြှင့်ခြင်း၊ အော်တိုခလုတ်ကိုဆင်းသက် / ဆင်းသက်ယူပါ အထူးသဖြင့်ဒီမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပျံကိုလေ့ကျင့်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်ကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေတဲ့အဝေးထိန်းခလုတ်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတယ်။
လေထဲတွင်တစ်ချိန်ကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်အမြင့်နှင့်အနေအထားနှစ်ခုလုံးတွင်အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ ဟိုမှာ ၎င်း၏အလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာသည်။ ဤအကူအညီသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစက်ကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ရုံသာမကအရည်အသွေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောအရာများကိုရှောင်ရှားလိုပါကဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများရိုက်ကူးရာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုအလိုအလျောက်ဆက်ထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ရှေ့ပြေးပုံစံအသစ်များအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၊ ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် VR မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသည်
အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ၎င်းကိုဘူတာမှရောသင်၏စမတ်ဖုန်းမှပါမောင်းနှင်နိုင်သည် Flyingsee အက်ပ်နှင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားပိုမိုတိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အတွက် transmitter ဖြင့်ပျံသန်းရန် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်မှာသေချာသည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်စမတ်ဖုန်းမှမောင်းနှင်မှုသည်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်မည်သည့်အရာများကိုအလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်မည်နည်း။ သင်က၎င်းကိုအက်ပ်မှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်ပါက စပ်စုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ဒါကမိုဘိုင်းဖန်သားပြင်ပေါ်မှာလမ်းကြောင်းဆွဲဖို့ခွင့်ပြုပေးတယ် အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အလိုအလျှောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကို run.
၎င်းတပ်ဆင်ထားသည့်ဘက်ထရီသည်စွမ်းဆောင်ရည် ၃၅၀ mAh ရှိပြီးတစ်နာရီကျော်ကြာအားသွင်းနိုင်ပြီး၊7မိနစ်ခန့်မှန်းခြေကြာချိန်။ ဟုတ်ပါတယ်, အထုပ်ထဲမှာလာပါတယ် ဓာတ်ခဲအပိုတစ်ခု အားသွင်းနိုင်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။
HD ကင်မရာနှင့် FPV
အခြား ဒီမော်ဒယ်၏အားသာချက်များမှာ HD ကင်မရာ၏အရည်အသွေးဖြစ်သည်1280x720p resolution ဖြင့် HD ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးနိုင်ပြီး 30 Mbps နှုန်းဖြင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်ကြာချိန်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်၎င်းကို iPhone X နှင့်အသုံးပြုခဲ့ပြီးအမှန်တရားမှာဤအရာအားလုံးသည်အလွန်အရည်ပျော်သည် FPV တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ် (low-end မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များစွာတွင်သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးလူခရီးစဉ်ကိုခွင့်ပြုသည်ဟုညွှန်ပြသော်လည်း၊ ပုံရိပ် latency အလွန်ကြီးသောကြောင့်ဤကဲ့သို့သောစမ်းသပ်ခြင်းကိုမဖြစ်နိုင်သဖြင့်လက်တွေ့တွင်မဖြစ်နိုင်ပါ) ဤမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ပိုက်ဆံအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်သင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ Wifi နှင့်ချိတ်ဆက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ မြင်ကွင်းဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအလိုအလျောက်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤအချက်မှာသင်ရွေးစရာရှိသည် FPV mode မှာလေယာဉ်မှူး သင်၏ဖုန်းကို VR မျက်မှန်အတွင်း၌ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ် ရိုးရာနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ပါ နှင့်ဘူတာရုံရှိ adapter ထဲတွင်မိုဘိုင်းထားပါ။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်မှာသင်သည်ပုံမှန် mode နှင့်တဖြည်းဖြည်းစတင်ရန်နှင့်အတွေ့အကြုံအလုံအလောက်ရှိပါက FPV စနစ်တွင်လေ့ကျင့်ရန်ပျံသန်းမှုကိုကြိုးစားကြိုးစားပါကအတွေ့အကြုံမရှိသောလေယာဉ်မှူးများအတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပြီးသင်မတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်သည်။
နိဂုံး, စျေးနှုန်းနှင့်ဝယ်ယူ link ကို
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Wings U29S သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားရှာဖွေရန်အတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်။ သူ့ စျေးကတော့ ၁၄၉ ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးအတွက် (HD ကင်မရာ၊ FPV မုဒ်၊ အနေအထားနှင့်အမြင့်ထိန်းချုပ်မှု၊ အလိုအလျောက်ပျံသန်းမှုစသဖြင့်) ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပိုက်ဆံအတွက်တန်ဖိုး။ သင်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာဒီ link ကနေတိုက်ရိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်.
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Wings U29S
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Analysis Wings U29S, VR မျက်မှန်နှင့် HD ကင်မရာပါသောခေါက်နိုင်သော FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်